ko htike's prosaic collection: “ဖိုးမောင်” အလိုရှိသည်။
ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ် ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ ဖိုးမောင် လာပြီ ကဗျာလေးကို ပြန်ဖတ်ကြည့်ရင်း၊ အာဏာရှင် နအဖရဲ့ “ရန်” ကနေ ကျွန်တော်တို့ ချစ်တဲ့ အမိ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကို ကာကွယ် ကယ်တင်ဖို့ “ဖိုးမောင်” လို လူမျိုးတွေ များများလို နေတယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်။
သာမန် အချိန်မှာလည်း ဖိုးမောင်က ရွာရဲ့လိုအပ်ချက်တွေ ဖြည့်ပေးပြီး၊ အရေးကြုံလာရင်လည်း အသက်ပေးဖို့ ဝန်မလေးတဲ့ ဖိုးမောင်ပါ။
“ဓါးပြ ငါ့အား ဖမ်း၍ထား” ဆိုတဲ့ အသံကို ဖိုးမောင်က ပေးနိုင်ခဲ့သလို၊ .... ဓါးပြ နအဖရဲ့ road map (၇) ချက် အလိုမရှိလို့ ဆိုပြီး ပြတ်ပြတ်သားသား ကန့်ကွတ်ပြီး သုံးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကိုသာ တောင်းဆိုတဲ့ အသံ ပေးနိုင်ဖို့ ဖိုးမောင်ကို အလိုရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း “ဖိုးမောင်” အဖြစ် ပြောင်းလဲပြီး၊ ဓါးပြနအဖရဲ့ ဆန္ဒခံယူပွဲကို ဝိုင်းကန့်ကွက်ကြပါစို့။
Posted by ကိုထိုက် at 10:06
Labels: ကဗျာ, စိတ်ဓါတ်ရေးရာ
If we all turn out to be Hpo Maung, there will be no bandits(SPDC) to destroy us.
Let us all become "Hpo Maung",today and always.
sogo 成人論壇kk視訊激情網愛網愛俱樂部網友一夜情聊天室aa片免費看a片AA片免費看百分百貼影片區百分百貼成人影片區a片線上看-aa片免費看百分百貼影片區百分百成人圖片百分百貼圖娛樂百分百百分百貼圖區百分百百分百圖帖免費色咪咪影片線上 a片免費色咪咪影片a片線上免費看免費 色咪咪影片免費色咪咪影片網免費色咪咪影片免費色咪咪貼影片免費算85cc免費影城免費貼影片區免費小魔女自拍區自拍美女聊天室免費-線上a片自拍美女聊天室自拍-美女聊天室情色文學成人小說自拍美女聊天室自拍密錄館本土自拍自拍 偷拍辣妹有約辣妹聊天室美女聊天室情人視訊高雄網線上a片情色自拍本土自拍網情人視訊-高雄網自拍影片情人視訊聊天室情人視訊苗栗網情人視訊 援交網視訊-高雄網視訊-交友網色美媚部落格免費-線上a片色美媚-部落格色美媚聊天室色美媚部落格2色美媚部落格免費 a色美媚部落格b片自拍部落格色美媚聊天室色美媚視訊聊天色美媚 交友網站男人幫情色論壇線上a片男人幫情色論壇男人幫男人幫論壇fhm男人幫fhm 男人幫台灣男人幫論壇sogo 男人幫論壇85cc男人幫論壇癡漢論壇女人色色網線上免費aaa片女人 色色網色色網色情卡通網非常好色-色色網男人女人 色色網情色交友網成人夜色